Momba anay - JIAXING INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.
Manana traikefa mihoatra ny 10 taona amin'ny tafo plastika sy rindrina rindrina izahay
JIAXING INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.dia naorina tamin'ny 1998 ary mpanamboatra mpamokatra plastika (PVC / FRP / PC) tafo sy rindrina any Shina. Taorian'ny fampandrosoana 10 taona, ny orinasantsika dia manana fahaiza-manao famokarana eo amin'ny 6 tapitrisa metatra toradroa isan-taona, ary efa natondrana tany Azia, Afrika, Eropa, Amerika atsimo, sns., Ary any India, Kambodza, Ekoatera, Kolombia, Venezoela, Mexico nahazo dera be dia be, ary nahatratra fifanarahana famatsiana isan-taona.
Omeo anao serivisy kalitao tsara indrindra
Amin'ny maha-mpamatsy vahaolana matihanina antsika dia afaka mamaha amin'ny fomba mahomby ny hafanana-porofo, asidra-harafesina, fampitana hazavana, famonoana rano ho an'ny mpanjifanay. Na mpanjifa vaovao na mpanjifa taloha, dia hanompo maharitra ny mpanjifa, ohatra, raha manana olana ny vokatra dia soloina maimaimpoana ary antoka maharitra. Amin'izao fotoana izao, mahatratra 50 kaontenera ny fanondranana isam-bolana.
Afaka manome vokatra be dia be toy ny tafo vita amin'ny tafo vita amin'ny tafo vita amin'ny tafo, takelaka tafo PVC, ravina tafo FRP mangarahara, taratasy polycarbonate, takelaka vita amin'ny vy, takelaka Sandwich, Ny vokatra rehetra dia mifanaraka amin'ny fenitra manara-penitra iraisam-pirenena, izay azo ampiasaina betsaka amin'ny trano fonenana, warehosue indostrialy, trano fambolena, trano fandraisam-bahiny, trano fandraisam-bahiny, sns.
Ny marika JX dia misy jogging sy xmitter. Ny dikany: ny jogging dia fanatanjahantena. Rehefa mihazakazaka amin'ny fiainana ny olona iray, aorian'ny fotoana be fanangonana lava dia ho hitany fa miha lavitra hatrany ny halavirana, ary mandroso amin-kerim-po toa an'i xmitter. Midika koa izany fa ny asantsika dia afaka mandroso fotsiny ary manome ny mpanjifa serivisy maharitra sy kalitao tsara indrindra.
Hatramin'ny nanombohany, ny orinasanay dia nanao fampandrosoana haingana niaraka tamin'ny filôzôfia momba ny "matihanina, ny faham-bola, ny fanavaozana ary ny paikadim-pandresena miaraka"! Amin'ny fiankinana amina ekipa matihanina, ny famolavolana vokatra miavaka sy ny fahaiza-manao fampandrosoana, vokatra avo lenta, vahaolana vaovao ary serivisy feno, afaka manome ny vokatra lafo vidy indrindra ho anao izahay.